एक नेता जसको साथी राजनीतिबाट सिनेमा……. – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
एक नेता जसको साथी राजनीतिबाट सिनेमा…….
By जीवन शर्मा Last updated Aug 2, 2020 10
१८ श्रावण, नयाँ दिल्ली। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह नेताको रूपमा चिनिनेछन जसले राजनीतिको तारलाई कर्पोरेट जगतसँग जोडेका छ । र फिल्म ग्लैमर पनि समावेश गरेका छ। त्यसपछि, समाजवादी नेता मुलायम सिंहसँग एक अद्वितीय सम्बन्धको साथ गठबन्धनले पनि युगको राजनीतिमा अमिट छाप छोडिदियो।
उत्तर प्रदेशको आजमगढमा जन्मे सिंहले कोलकातामा छात्र काउन्सिल स्टुडेन्ट्स काउन्सिलका युवा सदस्यको रूपमा यात्रा शुरू गरे जहाँ उनको पारिवारिक व्यवसाय थियो । त्यसपछि उनी लुटेन्सको दिल्ली राजनीतिमा राजनीतिक व्यवस्थापनमा संलग्न थिए। एक प्रसिद्ध अनुहार बन्नुभयो।
२००८ मा लोकसभामा अविश्वास प्रस्तावमा समाजवादी पार्टी (सपा) लाई सहयोग पुर्‍याउन यूपीए १ सरकारको समर्थन गर्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने विश्वास छ।
वास्तवमा वामपन्थी दलहरूले भारत-अमेरिका आणविक सम्झौताको बारेमा मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिए। त्यति खेर यूपीए सरकार सपाको समर्थनमा मात्र सत्तामा रहिरहन सक्थ्यो।
त्यतिखेर सपाका तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादवले कांग्रेससँग आफ्नो दशक पुरानो राग-द्वेष बिर्सन सहमत भए जसको श्रेय अमर सिंहलाई दिइन्छ।
उद्योगमा उनको सम्पर्कको कारण, सपाले धेरै कर्पोरेट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्‍यो र एक समय उनी मुलायम सिंह पछि पार्टीमा दोस्रो देखिन्थे।
मुलायमको जन्म स्थानमा मनाइएको वार्षिक सैफई उत्सव राष्ट्रिय हेडलाइन्समा परिणत भयो किनकि धेरै बलिउड स्टारहरू समाजवादी पार्टीको राम्रो दिनमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न त्यहाँ आउँथे।
२०११ मा अमर सिंहले किडनी प्रत्यारोपण गरे र धेरै समयसम्म अस्वस्थ थिए। उनका शनिबार सिंगापुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो जहाँ उनको मिर्गौला बिरामीको उपचार भइरहेको थियो। उनी। ६४ वर्षका थिए।
कोलकाताको बडा बजारमा आफ्नो परिवारलाई व्यवसायमा सहयोग पुर्‍याउँदा उहाँ कंग्रेसको सम्पर्कमा आउनुभयो र विद्यार्थी काउन्सिलका जवान सदस्य बन्नुभयो। विद्यार्थी परिषद बंगालको कांग्रेसको विद्यार्थी शाखा हो।
वीर बहादुर सिंहलगायत धेरै कांग्रेसी नेताहरूसँग नजिक भए पछि अमर सिंह मण्डलको राजनीतिमा समाजवादी नेताहरूको सम्पर्कमा आए।
त्यस समयमा मुलायम सिंहले राष्ट्रिय राजनीतिमा पाइला टेक्ने कोशिस गरिरहेका थिए, तब उनले सिंहलाई भेट्टाए जसले उनलाई सत्ताको गलियारेमा सहयोग गरे। यो सिंहको लागि महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, जसले मुलायमलाई मद्दत गर्न र विश्वास प्राप्त गर्न आफ्नो सम्पर्कहरू प्रयोग गरिरहेका थिए।
बेनीप्रसाद वर्मा, मोहन सिंह र रामगोपाल यादव लगायतका सपाका नेताहरूले विरोध गरे पनि अमर सिंह मुलायमको नजिक रहे। एक समय अमरलाई मुलायमका छोरा अखिलेश यादवको नजिकको मानिन्थ्यो। तथापि, तिनीहरूको दूरी पछि बढ्यो।
२००३ मा सपा उत्तर प्रदेशमा सत्तामा आएपछि सिंहले उत्तर प्रदेश सरकारका उद्योगपतिहरू र बलिउड व्यक्तित्वहरूसँग धेरै बैठकहरू आयोजना गरे। ती मध्ये केहीले राज्यमा लगानी पनि गर्‍यो।
भनिन्छ कि मुलायम सिंह यादवलाई पनि अमर सिंहले जत्तिकै सिंहको आवश्यकता थियो। सिंहलाई पछि २०१६ मा राज्यसभामा पठाइयो।
१९९६ देखि २०१० सम्म एसपीमा उनको पहिलो अवधिमा सिंहले कडा परिश्रम गरे र अमिताभ बच्चनको परिवारदेखि अनिल अंबानी र सुब्रत रॉय जस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग अक्सर देखिन्थ्यो।
उद्योगपति अनिल अंबानीलाई स्वतन्त्र सदस्यको रूपमा पठाउने एसपीको निर्णयको आर्किटेक्ट पनि मानिन्छन्। यद्यपि पछि अम्बानीले २००६ मा राजीनामा गरे।
भनिन्छ कि सिंहले २०० US मा क्लिन्टन फाउन्डेशन मार्फत अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको लखनऊ भ्रमण आयोजना गरेका थिए। मुलायम सिंह त्यस समयमा राज्यका मुख्यमन्त्री थिए।
अमर सिंहले क्लिन्टन फाउन्डेशनलाई ठूलो रकम चन्दा दिए पनि विवादमा छ, तर सिंहले यसलाई अस्वीकार गरे।
२०१५मा एक अमेरिकी लेखकको पुस्तकले दाबी गर्‍यो कि अमर सिंहले २००८मा क्लिन्टन फाउन्डेशनलाई १ लाख लाख डलरको बीचमा दान दिएका थिए। लेखकले आणविक सम्झौताको सन्दर्भमा पुस्तकमा अन्य आरोप पनि लगाए जसलाई अमर सिंहले अस्वीकार गरे।
२०१० मा अमर सिंहलाई सपाबाट निष्कासित गरियो र पछि उनको नाम ‘नोटको लागि मत दिनुहोस्’ को आरोपमा घोटाला भयो र २०११ मा उनलाई पक्राउ गरियो।
यद्यपि समाजवादी पार्टीमा अखिलेश यादव प्रमुख अनुहारको रूपमा देखा परे र उनका बुजुर्ग पिता मुलायम सिंहको नियन्त्रण पछि पार्टीमा अमर सिंहको दबदबा पनि कम हुन थाले।
वरिष्ठ एसपी नेताहरूको दबाब र मुलायमसँग बढ्दो मतभेदका कारण अमर सिंहले पार्टीका विभिन्न पदहरूबाट राजीनामा गरे। २०१० मा उनलाई पार्टीबाट निकालियो। यससँगै, सपा नेतासँगको उनको सम्बन्ध लगभग दुई दशक पहिले समाप्त भयो।
त्यसपछि त्यो समय आयो जब आफ्नो राजनीतिक प्रासंगिकताको लागि संघर्ष गरिरहेका अमर सिंह केही वर्ष पछि फेरि मुलायम सिंहको नजीक आए। तर दोस्रो पटक सपामा फर्केका सिंहलाई २०१६ मा अखिलेश यादवले पार्टी हावी गरेपछि फेरि बर्खास्त गरियो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ
(आरएसएस) को नजिक आए। उनले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति आजमगढमा संघलाई दिने कुरा पनि घोषणा गरे।
दिल्लीको लोधी इस्टेटमा उनको आधिकारिक निवास बाहिर, उनलाई अक्सर मिडियाले सामना गरेको थियो। ऊ प्रतिद्वन्द्वीलाई आफ्नो विशेष शैलीमा आक्रमण गर्थ्यो। केही चोटि उनले मुलायम र बच्चन परिवारलाई पनि बचाएनन्।
उनका अमिताभ बच्चनको परिवारसँग पनि निकट घनिष्ठ सम्बन्ध थियो तर यस बिचमा थोरै खिन्नता रहेको थियो। तर सिंहले फेब्रुअरीमा अमिताभ बच्चनको बिरूद्ध उनको भनाइलाई पछ्याए।
उनले ट्वीटरमा लेखे
‘आज मेरो बुबाको पुण्यतिथि हो र वरिष्ठ बच्चन जीबाट मैले यसका बारे सन्देश पाएको छु। जीवनको यो चरणमा, जब म जीवन र मृत्युको लडिरहेको छु। म अमित जी र उनको परिवारलाई मेरो कटु प्रतिक्रयाको लागि दुख दिन्छु। भगवान सबैलाई आशीर्वाद दिनुहोस्।
अमर सिंहले २०११ मा राष्ट्रिय मञ्चको गठन गरे र २०१२ यूपी विधानसभा चुनावमा पार्टीका उम्मेदवारहरूको लागि प्रचार गरे। अभिनेत्री जया प्रादा पनि मनोनीत भएकी थिइन, तर उनका सबै उम्मेदवारहरू हारिए।
यस अघि सिंहले तेलुगु देशम पार्टीका सांसद जया प्रदालाई सपामा ल्याएका थिए र उनी रामपुरबाट पार्टीको टिकटमा दुई पटक लोकसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन्।
जया प्रादाले सिंहप्रति उनको वफादारी कायम राखिन् र उनीसँगै पार्टी छोडे। भनिन्छ कि २०१२ को लोकसभा चुनावमा भाजपाले अमर सिंहको आदेशमा जयपुरलाई रामपुरबाट टिकट दिएका थिए। यद्यपि उनले आर्च खान प्रतिद्वंद्वी आजम खानसँग पराजित गरे।
अमर सिंहले २०१४ को लोकसभा चुनाव अजीत सिंहको राष्ट्रिय लोकदल टिकटमा लडे तर हार भए। पछि, मिडिया अन्तर्वार्ताको शृंखलामा उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सत्ताधारी बीजेपीको प्रशंसा गरे।
पाँच दिनका लागि झापा लकडाउन
आरएमडीसी लघुवित्तको अघिल्लो वर्षको भन्दा १३.३८% कम नाफा
इजरेल-यूएईबीच ‘ऐतिहासिक’ शान्ति सम्झौता, के छ सम्झौतामा
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सकारात्मक भेटघाट